“Fankii Iyo Suugaantii Waxay Noqdeen Qabyaalad….Saxaafaddana Waxaan Leeyahay Iska Ilaaliya Oo Ka Feejignaada….”Aadan-Dhoolayare. | Maalmahanews
“Fankii Iyo Suugaantii Waxay Noqdeen Qabyaalad….Saxaafaddana Waxaan Leeyahay Iska Ilaaliya Oo Ka Feejignaada….”Aadan-Dhoolayare.
“Dhalinyaradu haddii ay horumar doonayaan ciyaaraha qabyaalada ha ka daayaan oo si nadiifa ha loo ciyaaro xata..”
Hargeysa(Hayaannews): Wasiirkii hore ee Wasaarada Cadaalada Somaliland Md. Aadan Axmed Cilmi (Dhoola-yare) ayaa sheegay inay qabyaaladii meel xun mareyso dalka, isla markaana uu fankii iyo Suugaantiina ay noqdeen qabyaalad, Ciyaarihii ay noqdeen qabyaalad, isaga oo uga digay Saxaafadda.
Sidaa waxa uu Aadan-Dhoolayare ku sheegey Warsaxafadeed uu ku saxeexan-yahay oo maanta nuqul ka mid ah soo gaadhsiiyay Xafiiska Shabakada Wararaka ee Hayaannews, waxaanu u dhignaa sidan:
“Asalamu caleykum Wa raxmatulaahi Wa barakaatu. Caawa waxaan jeclaystay inaan bogan ku qoro laba arrimood oo aan beryahan aad ula yaabana,iyadoo aynu ognahay heerka qabyaaladu mareyso oo runti dadkii aad xushay,siina xoogeysanaysa inkasto marka la yaabo ay guushu ugu dhawdahay.
Waxa jirtay inay saddex shay ka caaganaan jireen qabyaalada oo kala ah.
Sports-ka ama ciyaaraha nooc kasta.
Fanka iyo dhaqanka.
Hadaba,haddii aan ka hadlo kow iyada siyaasado beri hore ayey cabtay qabyaalada oo soomay dhawaan markii ay meesha ka baxday ayaa ina wadi kara ee ay noqotay keebeynu isku qolo nahay mana dhawa dawadeedu oo waxay mareysa marka masuul qaranka u shaqeeya la dhaliilo in loogu hiilineyo qabyaalad hada xil qaran buu haya oo ay umaddu leedahay oo wuu u dhexeeya,berigi hore marka Boqor ama Suldaan la bokhrado waxa la odhan jirey Suldaanku waa inoo dhex xigto ayaynu u wada nahay xigaal gaara ma laha.
Waxaaba dhici jirtay in magtiisa la bixiyo oo aanay cid gaar ahi sheegan.Waxaa dhici jirtey in haddii nin aflagaadeeyo loo hiilin karin.waxaan jirta maahmaah la yidha “Isaaq laba ka xeeran” oo ah inuu hiilku ceeb ahaa.Waxa kale oo reer miyigu xeer u lahaa in haddii nin u hiiliyo inaadeerki lagu ganaaxi jiray shan halaad oo xaal ah ama cid waliba xeer xukun ah ka lahayd.
Waxaana la odhan jiray haddii uu nin caayo ama eedeeyo Suldaanka oo u dhigna Madaxweyne ama Wasiir in lagu yidha ka laga dareemo inuu dhiigu dhaqaaqay oo miyaad ka xigta soo Suldaankiisi ma aha. Cidina kuma dhici jirin in loo hiiliyo ninka Madaxda ahaa waayo xil la wada leeyahay buu haya.
Maantana qaar aan waxba uga shan iyo toban ahayn oo ay hayb guud wadaagaan baa ka soo horeeya walaalkii ama xigtadiisa soke haddii la dhaliilo,la caayo ninka masuulka ah,waayo waxa dadkii iskaga khaldan horta qofkan la maagayo maxaa loo maagaya? ee cid aanay waxba wadaagini u maagaysa may garan xilkan u hayo inuu wax ku leeyahay cida aflagaadaysey waayo haddii aanu madax noqon mabuu barteen. Inkastoo dadka qaarkood ay masuulka hayb ahaan u caayaan hadana isaga iyo ilaahiisa calooshiisa ILAAHAY-baa og adigu inaad arkayso uun xukun yaanay qabyaalad ku qaadin inta badan waxa jirta masuulka aad u hiilineyso inaanu kuba aqoon oo uu kaaga aqoon badan yahay ka aflagaadeeyay kursiga ayaan cayda leh.
Waxaana dhacda inuu masuulku adeegsado mid ay hayb wadaagaan oo aanu masuulka laftiisu garan xilka uu hayo inay umaddu leedahay isagoo ku beer laxawsanaya reerkeena loo jeeda oo waa xilkeeni sida ay reerkoodu leeyahay kursiga uu ku fadhiyo waxaynu ognahay isaga oo keliya ayaa dan ku qaba hadii uu wax qabtana dadka oo dhan bay u dhaxeysa.
Waxaanan leeyahay dadku danta guud bay wada leeyihiin ee danta gaara masuulka oo qudha ayaa leh lama lihid,marka ogsonow haddii aad u hiilin weydo masuulka waxbu qaban doona oo dhaliisha wuu ka faa’iideysan haddii kale dantii guud wey ku daysay. Weliga masuul qaran ha ugu hiilin qabyaalad, wax ha u qabto qarankee kolkaasaad helaysa wax la wada leeyahay oo wax kaa soo gaadhayaan laakiin markaad difaacdo waad qadaysa waxba ma helaysid. 2.Sportigi wuxu noqday qolo qolo ayaa loo ciyaara kooxihi waxay noqdeen reero ka soo kala jeeda kooxo isku reero ah way xumaatay waxa jirta ciyaaruhu waxay dhisaan caqliga iyo jidhka caafimaad qaba maantase waxay maraysa yaan reerkeena kubada laga badin iyo ina hebel baa goolka dhashay oo lagu faanayo kii yaraaye goolka dhaliyay ilmaadeer baanu nahay xata waxay maraysa in garsoorayaashi u kala eexdaan ciyaaraha waa tii la qaban kari waayay dhamaystirki ciyaarihi gobolada markay qabyaalad gashay.Dhalinyaradu haddii ay horumar doonayaan ciyaaraha qabyaalada ha ka daayaan oo si nadiifa ha loo ciyaaro xata dhibta u baddani waxa dhacda lagu kala aar goosto marka kubadda la ciyaarayo oo si xun la isu haraatiyo.Habeen ayaan wiil ka yimi Qatar geeyay Garoon lagu ciyaaro markii uu soo ciyaarey wuxuu ii sheegay in inamadii uu la ciyaaray gatanayn ciyaarta oo aanay si xirfadaysan u ciyaarin oo wey isku xanaaqayeen si xun bay isugu dhacayaan oo aan loo ciyaarin si tikniko iyo xarfad leh oo midba ka kale ayuu iska eegaya kubadaba lama eegeyo.inanki yaraa wuu yaabay.Dhalinyaradu ha bartaan inay ciyaaruhu yihiin waxa qabyaalada lagaga koro dhaqan xumida ciyaarahana ha la bedelo.
Ugu dambeyn ta ugu yaabka badani waxay tahay fanka oo noqday isaguna qabyaalad oo aad arkayso in kooxo qabyaalad wax ku matala ay jiraan oo ay reero soo noqonayso fanki iyo sugaanti berigi hore waxa dadka isbari jiray oo qabyaalada ka saari jiray umadda ciyaaraha iyo fanka oo siyaasada aabo ahaa.
Waxaan ku soo gebogebeynaya dib ha la isu saxo gaar ahaan dhalinyaradu hana ogaadaan inuu lumeyo wakhtigoodu ha u faa’iidaynina nin wakhtigiisi soo qaatey qaarna ku dul amaahday hana la bilaabo in laga joojiyo qabyaalada Ciyaaraha iyo fanka waxay mareysa in xataa xayeysiisku dukaamadu noqdeen inaadeerkay baa ii xayeysiinaya oo fanki la kala gureyo.
Talo saxaafadda ku socota bal idinka hadhaye is ilaaliya inkasto ay jirto inay Siyaasiyiinta qaarkood ku shaqeeyaan inuu mid yar oo uu adeer u yahay afhayeen ka dhigtaan bal iska ilaaliya ayaan laydin kala xadin”